GỤỌ NKE Albanian Amharic Chichewa Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian
SITE N’AKA ONYE EDEMEDE TETA! NA ZAMBIA
AFRICA—kọntinent nke ndị bi na ya nwere ezé mara mma ma brọsh ịsa ezé ndị a na-emepụta ma na-ere na ya dị ole na ole! Ò si aṅaa dị otú ahụ? N’ebe ọtụtụ nọ, ihe na-eme ka ezé ha na-egbuke egbuke ma ọ bụrụ na ha achịa ọchị bụdị mkpịsị osisi nkịtị—atụ!
Ọ dị mgbe ndị Babilọn na-ata atụ, e mesịakwa, ndị Ijipt, Gris, na Rom tawara atụ. E jikwa obere osisi a e ji emere “brọsh ịsa ezé” mee ihe n’ebe nile n’Arebia n’oge Okpukpe Alakụba na-abatabeghị na ya. N’ihe dị ka afọ 300 gara aga, ndị Europe kwụsịrị inwe mmasị n’ịta atụ, n’agbanyeghị nke ahụ, a ka na-ata ya nnọọ n’akụkụ dị iche iche nke Africa, Eshia, nakwa n’Etiti Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa.
Osisi a na-esikarị na ya enweta atụ n’Etiti Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa bụ saltbush. N’Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa, a na-esi n’osisi oroma nkịrịsị nakwa n’osisi oroma nkịtị enweta atụ, ebe a na-eji osisi dogon yaro emere atụ n’ala India, bụ́ ebe fọrọ obere ka o ruo otu kọntinent. N’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, ọ fọrọ nke nta ka osisi na akụ́kụ́ ndị e si na ha enweta atụ ruo 300. Olee otú atụ na-esi eme ka ezé dị ọcha?
Ka a na-atari osisi ahụ, isi ya na-abịa yie “brọsh” dị jagajaga. A nọgide na-ata ya, ọ na-ewepụ irighiri ihe ndị kpafanyere n’ezé ma mee ka ọbara na-agazu n’agbụ̀. Ịta atụ na-emekwa ka asọ mmiri na-agbapụtakwu, bụ́ nke na-arụ ọrụ dị ka ihe nsacha ọnụ e bu pụta ụwa, nke na-asapụ nje bacteria ma na-eme ka ọnụ ghara ịdịrị ha mma maka ịnọ na ya mụbaa. *
Ma atụ na-arụ ọrụ dị ka brọsh, ọ na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ. Alaka na mkpọrọgwụ osisi ụfọdụ nwere mmiri ọgwụ ndị na-eme ka ezé ghara ire ngwa ngwa. E gosiwo na ihe ndị e nwetara n’osisi atụ ụfọdụ nwere ihe ndị na-egbu nje bacteria na nje fungus. Alaka osisi atụ ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ, pụrụ ọbụna inye aka gbochie ọnyá afọ. Na Namibia, atụ ndị e nwetara n’osisi a na-akpọ muthala na-eme ka nje ndị na-akpata ezé ure, ọrịa agbụ̀, na ọnyá akpịrị ghara ịmụba. Ihe a sitere n’okike nke e ji eme ka ezé dị ọcha pụrụ ime ka ezé ghara ịkpọpu akpọpu ma meekwa ka úkwù ezé na agbụ̀ sikwuo ike. Ụlọ ọrụ ụfọdụ na-emepụtazi ihe e ji asa ezé bụ́ ndị nwere ihe ụfọdụ e nwetara n’ụdị osisi ndị dị otú ahụ.
N’ezie, ụfọdụ ndị na-ahọrọ iji brọsh ịsa ezé asa ezé ha. Ma ị̀ họọrọ iji nke ahụ ma ọ bụ ịta atụ dị ka ndị oge ochie mere, otu ihe doro anya: Idebe ezé ọcha bụ akụkụ dị mkpa nke mmadụ ilekọta ahụ́ ike ya.
^ par. 6 N’eziokwu, nri dịkwa mkpa. Ndị bi n’ime ime obodo ndị dị n’Africa na-erikarị nri ndị a na-ewepụghị ihe ọ bụla na ha nakwa akwụkwọ nri karịa ndị ibe ha bi n’ebe ndị mepere emepe. Ha adịghịkwa erikarị nri ndị shuga dị na ha, nri ndị e wepụrụ ihe na ha, na mmanya ọtọ bịrịbịrị—ihe ndị a ma na-akpata ezé ure.
[Foto dị na peeji nke 29]
Dogon yaro bụ otu n’ime osisi ndị e si enweta atụ
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mkpịsị Osisi nke Na-eme Ka Ezé Dị Ọcha